चलचित्र छाड्नेको सूचीमा अभिनेत्री वर्षा नै अगाडि - Everest Dainik - News from Nepal
चलचित्र छाड्नेको सूचीमा अभिनेत्री वर्षा नै अगाडि
काठमाडौं, भदौं ११ । चलचित्र क्षेत्रमा संख्या संख्या बढ्दै गएपनि हिट चलचित्रको मामिलामा ‘अनलक्की’ अभिनेत्री हुन् वर्षा सिवाकोटी । ‘ संख्या बढ्दै गएपनि हिट फिल्मको मामलामा ुअनलक्कीु नायिका हुन् बर्षा सिवाकोटी ।
सुपरहिट चलचित्र ‘नाईं नभन्नू ल २’ बाट अभिनय यात्राको सुरुवात गरेकी यी अभिनेत्रीको खातामा भने असफल चलचित्रको संख्या बढी भएको छ ।
अभिनयमा अब्बल मानिने उनको पछिल्लो पटक चलचित्र ‘पशुपतिप्रसाद’ ले बक्स अफिसमा राम्रो कलेक्सन गरेको थियो । तर, यो चलचित्र सफल हुनुले उनको करियरलाई खासै ठूलो फरक पारेन ।
सफलताको सबै श्रेय अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले आफ्नो पोल्टामा पार्दा उनी ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’ झैं भईन् । अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटको अभिनित पछिल्ला नेपाली चलचित्र सुब्बा साब, कारखाना, लप्पन छप्पन र भैरे बक्स अफिसमा नराम्रोसँग डुबे ।
याे पनि पढ्नुस ‘बटरफ्लाई’ को ट्रेलर सार्वजनिक
गतहप्तामात्र प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘जय शम्भु’ पनि बक्स अफिसमा पत्तासाफ भयो । एउटा मामलामा भने बर्षा ‘लक्की’ छिन् । चलचित्रले व्यापार जस्तै गरेपनि उनको हातमा फिल्मको कमी छैन । कुनै न कुनै फिल्ममा उनी ज्वाइन भइरहेकी हुन्छिन् ।
पछिल्लो समय भने साइन गरिसकेको फिल्म छाड्ने बानीले उनलाई आलोचित बनाएको छ ।
अचेल उनलाई साइन गरिसकेको चलचित्र छाड्ने अभिनेत्रीको ‘क्विन’ भन्न थालिएको छ । बर्षाले फिल्म छाड्ने शिलशिलाको सुरुवात फिल्म ‘मेरो पैसा खोई ?’ बाट भएको थियो ।
अभिनेत्री बर्षा राउत ज्वाइन भए लगत्तै उनले फिल्मबाट हात झिकेकी थिइन् । यसपछि चलचित्र ‘रानी महल’ छाडिन् । फ्लोरमा निस्किने बेला फिल्म छाडेपछि उनको ठाउँमा पूर्व मिस नेपाल निकिता चन्दक भित्रिइन् ।
उनले फिल्म छाड्ने शिलशिला तेस्रो पटक पनि दोहोरियो । हालै उनले फिल्म ‘गोपी’ छाडिन् । कति अभिनेत्रीहरु चलचित्र नपाएर घरमा सिरियल हेरेर बस्नु परेको छ । बर्षा भने चलचित्र छाड्ने अभिनेत्रीको लिस्टमा सबैभन्दा अगाडि छिन् ।
कुनै फ्लोरमा जान ढिलाई भएको त कुनैमा भूमिका चित्त नबुझेको भन्दै उनले साइन गरिसकेको फिल्म छाडेकी छन् । उनको यो बानीबाट धेरैले हैरानी खेपेका छन् । अहिले उनमा व्यावसायिकता नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र ‘गोपी' यही माघ १८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा
अब बर्षालाई फिल्ममा लिनु अगाडि निर्मातारनिर्देशकले समेत एकपटक सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो एक कलाकारको करियरका लागि सुखद पक्कै होइन । यही शैली पछ्याउने हो भने ढिलोचाँडो उनको नाम लिनसाथ फिल्ममेकरले बाटो मोड्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
स्क्रिप्ट र भूमिकाको बारे एउटा कलाकारले फिल्म साइन गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नु पर्छ । साइन गरिसकेपछि विभिन्न बाहना बनाएर अलगिनु कलाकारको धर्म होइन ।
कतै उनी लगातार फिल्म छाडेर आफूलाई डिमाण्डेड अभिनेत्री देखाउन त खोजिरहेकी छैनन् ? वा, फिल्मको लस्कर देखेर उनमा घमण्ड सुरु भएको होइन ?
आशा गरौं, अब बर्षाले आफ्नो बचपना त्याग्ने छिन् ।
ट्याग्स: barsa shiwakoti, kollywood